XOG CUSUB:-Dagaalka Maleeshiyooyinka Habar-gidir & Murunsade iyo Barakac. – idalenews.com
inta la ogyahay seddax qof ayaa ku dhimmatay in ka badan 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaallo maanta ka dhacay xerada 77 oo dhow degmada Deyniile ee magaalada Muqdisho.
Dagaalka ayaa wuxuu u dhexeeyaa ciidamo kawada tirsan dowladda kuwaasoo isku heesta dhul banaan oo ay lahayd dowladii kacaanka oo goobta lagu dagaallamayo ku yaalla. Labada ciidan ayaa kasoo kala jeeda beelaha Habar-Gidir iyo Murusade.
Ciidamada dagaallamaya qaar ayaa diiddan in la dhisto deegankaas balse kuwa kale ayaa ku dooddanaya in laga dhigo deegan la daggan yahay, waxaana dagaalka uu sababay in qoysas fara badan oo ka soo cararay dagaalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Qoyooleey iyo gobalka Shabeellaha Hoose ay ka sii qaxaan.
Dagaalka ayaa la sheegay in uu soo billowday seddax cisho ka hor balse maanta ayuu aad u xoogeestay, waxaana la arkayay labada dhinac oo saran dabaqyo iyo dhismooyin kale oo ku yaalla goobta lagu dagaallamay.
Waxaa kaloo la arkayay qoysas u badan carruur iyo haween oo gacanta iska jiidaya kuwaasoo ka baxsanaya dagaalka ka socday agagaarka degmada Deyniile ee magaalada Muqdisho.
Inta badan waa dhaqan ay lee yihiin ciidamada dowladda kuwaasoo ku dagaallama caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Ma jirto cid ilaa hadda kala dhex gasha labada ciidan ee ku dagaallamaya Muqdisho, waxaana wararkii ugu dambeeyay ee la soo wariyay ey sheegayaan in dagaalka uu iskiis u joogsaday balse labada ciidan ay is-hor fadhiyaan.
Maamulka Puntland iyo dowladda Kuweyt oo kala saxiixday hashiis garoon dhisid (SAWIRRO).